5 Sababood Oo Gabaryahay Aad Wali Ula'dahay Nin Ku Guursada - Aayaha
5 Sababood Oo Gabaryahay Aad Wali Ula’dahay Nin Ku Guursada
Aayaha editorOctober 28, 2018
Shabakadda Arrimaha Bulshada ee Aayaha Online, ayaa waxa ay idiin soo gudbineysaa 5 sababood oo wali aad doob u tahay xittaa adigoo muddo dheer nin xiriir laleh.
Rajooyin aan caadi ahayn
Inaad yeelato rajooyin aan caadi ahayn waxay noqon kartaa sababta aad doobad u tahay xittaa adigoo rabtid guur iyo xiriir, ma jiro xiriir dhammeystiran xiriir kasta waxa uu leeyahay sare u kac iyo hoos u dhac, haddii aad rabtid wax ka dheeraad ah kor nolol sareysaa waxaad leedahay rajooyin aan caadi ahayn.
2. Waxaad rabtaa lamaan aan cillad lahayn
Waxaad rabtaa inaad hesho lamaan wanaagsan oo wax kasta oo aad u baahantahay haayo, qofna ma noqon karo cilad la’aan mana noqon karo qof dhinac kasta u wanaagsan, sababtaas ayay noqon kartaa waxaad wali doob u tahay, dhammaanteen cillado Ayaan leenahay hadaan bini aadam nahay waana inaad diyaar u noqotaa in lamaankaaga aad cilad ku qaadato.
Ninka aad shuksaantid ayaa sabab u ah
Nooca Ninka aad shukaansatid ayay noqon kartaa inuu sabab u yahay doobnimadaada, ma filan kartid xiriir caafimaad qaba marka aad shukaansatid nin xun, mararka qaar nooca ninka aad rabtid ayaa ah mid aanan kugu habooneyn ama xun.
Rabitaan xad dhaaf ah
Noqoshada qof baahi aad ah u qaba guur iyo xiriir ayaa kaa dhigi karta qof doob ah sababtoo ah waxaad iska dhigtay qof raqiis ah oo aanan soo jiidasho lahayn wuxuuna ninka kuu arkaa qofaan qiimo lahayn marka ha iska dhigin qof baahi badan u qaba guur oo raqiis ah oo ninka ha usoo bandhigin inaad baahi aad ah u qabtid.
Maadan iska dhigin qof la heli karo
Inaad iska dhigtid qofaan la heli Karin sababo la xiriira mashquulkaaga nololeed ayaa ah sabab kale oo aad doob u tahay, waqti u sameey noloshaada, waqti la qaado saaxiibada, la kulan saaxiibo cusub oo booqo goobo cusub.